Dhamaan wararka cusbooneysiinta 1.2 ee PUBG Mobile | Androidsis
Xilliga 16-aad ee PUBG Mobile ayaa ku dhow inuu dhammaado. Waxaa jira maalmo kooban, laakiin kahor inta aysan taasi dhicin, Tencent waxay horey u shaacisay taariikhda daahfurka ee cusbooneysiinta xigta ee dagaalka caanka ah ee royale, oo u dhigma nooca 1.2.
Waa 12-ka Janaayo maalinta uu horumariyaha bilaabi doono inuu sii daayo cusbooneysiintan. Midkan waxaa ku raran warar badan, hagaajinno, hagaajinta cilladaha iyo hagaajinta oo aan hoos ku soo koobi doonno iyada oo loo marayo qoraallada balastarka ee ay daabacday PUBG.
1 Kuwani waa dhammaan wararka cusbooneysiinta 1.2 ee PUBG Mobile
1.1 Habab cusub, khibrado cusub
1.1.1 Ciyaarta Runic Power (Jan 12 - Maarso 7):
1.1.2 Habka Awoodda Awoodda (wuxuu ka bilaabmayaa EvoGround Febraayo 5)
1.1.3 Metro Royale: Sharaf (laga bilaabo Janaayo 12)
1.2 Qoryo cusub, xulashooyin cusub
1.3 Waxqabadka ciyaarta iyo hagaajinta kale
1.3.1 Horumarinta waxqabadka aasaasiga ah
1.3.2 Kordhinta amniga
1.4 Hagaajinta khibradaha aasaasiga ah
1.4.1 Eeg hagaajinta tusaalaha
1.4.2 Hagaajinta cirka iyo hagaajinta ficilka.
1.4.3 Muuqaal si loo joojiyo dib u soo celinta
1.4.4 Isu dheelitirka Qoryaha - Hagaajinta Qoryaha Waxqabadka Bolt
1.5 Waxyaabaha kale ee xilliga cusub
1.5.1 Xilliga Royale Pass 17: AWOODDA RUNIC (Janaayo 19 - Maarso 21)
1.5.2 Mawduuca Cusub ee Cheer Park:
1.5.3 Bandhig Bacriminta (Janaayo 13 illaa Janaayo 27)
Kuwani waa dhammaan wararka cusbooneysiinta 1.2 ee PUBG Mobile
Habab cusub, khibrado cusub
Ciyaarta Runic Power (Jan 12 - Maarso 7):
Ciyaartoydu waxay awoodi doonaan inay doortaan nooca tamarta rune ee Jasiiradda 'Spawn Island'. Ka dib markii ay doorteen, waxay heli doonaan laba karti, kuwaas oo ah sida soo socota:
Yeedho Kartida: wuxuu u yeerayaa giraangiro olol ah oo si tartiib tartiib ah horay ugu socda, wax ka qabanaya dhaawacyada gubanaya ee ciyaartoyda cadawga ah ee ay taabato.
Hagaajinta xirfadda: waxay kugudareysaa waxyeello gubaneysa ammo-gaaga muddo kooban.
Yeedho Kartida: Wuxuu u yeeraa gidaar baraf ah. Qeyb kasta oo ka mid ah darbiga barafka ayaa gooni loo burburin karaa. Marka darbiga barafku soo ifbaxo, wuxuu kor u qaadi doonaa ciyaartoyda ama gawaarida si toos ah dushooda.
Hagaajinta xirfadda: waxay ku dareysaa saameyn qaboojiye ammo waqti gaaban. Qabowgu wuxuu yareeyaa waxtarka bogsashada.
Yeedho Kartida: U yeedhida gaashaan-dabayl-badh-hufan ah oo yareysa dhaawaca rasaasta ka timaadda dibadda gaashaanka.
Hagaajinta xirfadda: kordhi xawaaraha dhaqdhaqaaqaaga oo dib u rar.
Habka Awoodda Awoodda (wuxuu ka bilaabmayaa EvoGround Febraayo 5)
Dib u soo muuqasho
Kooxaha wada shaqeynta waxay dib uga cusbooneysiin karaan Xarumaha Cilmi baarista
Aaladda Awoodda Qalabka xabadka: waxay yareysaa dhaawaca laabta waxayna kordhisaa awoodda boorsada.
Xoog Armor Arm Piece: wuxuu yareeyaa dhaawaca gacanta wuxuuna kordhiyaa dhaawaca miisaanka.
Awoodda Lugta Lugta Qayb: wuxuu yareeyaa dhaawaca lugta iyo burburka dhicitaanka. Waxay bixisaa xirfad orod dhakhso leh.
Isku soo wada duuboo Awoodda Awoodda buuxda ayaa furaysa hubkiisa ugu dambeeya, Grenade-ka neefta ee Dragon.
Dhacdooyinka Matrix 1: Soosaarka sahayda gobolka oo kafiican
Matrix 2 Dhacdo: Matrixyo badan oo la siidaayo iyo sahay si aad ah uga saraysa sii deyn kasta.
Dhacdooyinka Matrix 3: Qalabka nolosha ku shaqeeya ee saldhigyada cilmi baarista waa la hawlgeliyaa waxaana loo isticmaali karaa in lagu ogaado ciyaartoy ku xeeran.
Metro Royale: Sharaf (laga bilaabo Janaayo 12)
Nidaamka maamuuska cusub ee Metro Royale.
Hab cusub oo kali ah.
Horumarinta Metro Royale.
Qoryo cusub, xulashooyin cusub
Qoriga weerarka cusub oo adeegsada rasaasta 5.56mm. Waxaa lagu shubi karaa 25 wareeg waxayna leedahay heerka ugu dhaqsaha badan dabka qoryaha dhexdooda.
Waxaa lagu qalabeyn karaa muzzle (qoryaha), baaxadda iyo mag (qoryaha).
Kaliya waxay ku muuqataa khariidada Livik, taas oo u gaar ah PUBG Mobile.
Waxqabadka ciyaarta iyo hagaajinta kale
Caqli galinta soo hagaagtay si xirmooyinka si dhakhso leh u furmaan markii ugu horeysay ee la furo.
La hagaajiyay isticmaalka awoodda aaladaha macruufka ee dhamaadka sare si looga dhigo aaladaha ay u badan tahay inaysan kululeyn.
Isticmaalayaasha Android waxay isticmaali karaan muuqaalka cusbooneysiinta kordhinta si ay u cusbooneysiiyaan ilaha ciyaarta, iyagoo si weyn u yareynaya cabirka soo degsashada kheyraadka ee loo baahan yahay si ay ciyaarta u bilaabaan.
Cusbooneysiinta Aaga Cusub ee Amniga ayaa sugaya inaad soo ogaatid.
Ogaanshaha hagista la hagaajiyay ee ujeedka gawaarida, aragtida raajada, boodada masaafada dheer, iyo khiyaamada xawaaraha dhaqdhaqaaqa.
Ogaanshaha iyo kahortaga noocyada aan rasmiga ahayn ee macmiilka PUBG Mobile.
Hagaajinta khibradaha aasaasiga ah
Eeg hagaajinta tusaalaha
Aragtida holograafiga ah waa la hagaajiyay, taasoo ka dhigaysa tusaalayaasha mid u caddeeya ciyaartoyda.
Qaabka muuqaalka ee 'X3' ayaa loo hagaajiyay si looga dhigo mid dabiici ah.
Hagaajinta cirka iyo hagaajinta ficilka.
Animation-ka soo degida ayaa la hagaajiyay si uu sifiican ula jaanqaado xawaaraha ay ciyaartoydu ku deggaan.
Hawsha degitaanka ayaa ka dhigtay mid fudud.
Muuqaal si loo joojiyo dib u soo celinta
Tubada badhanka dabka markaad dib udajineyso si aad u joojiso dib u dhigista.
Isu dheelitirka Qoryaha - Hagaajinta Qoryaha Waxqabadka Bolt
Kordhinta waxyeelada Kar98K iyo M24.
Gaabiyey inta udhaxeysa tallaalada Kar98K iyo M24.
Si yar ayuu u kordhiyay xawaaraha waxqabadka boliiska ee Kar98K iyo M24.
Waxyaabaha kale ee xilliga cusub
Xilliga Royale Pass 17: AWOODDA RUNIC (Janaayo 19 - Maarso 21)
Iskuxirka mawduucyada RUNIC POWER iyo abaalmarinta.
Hawlgallada RP ayaa dib loo eegay si loo yareeyo dhibaatada loona kordhiyo abaalmarinta dhibcaha.
Mawduuca Cusub ee Cheer Park:
Mawduuca Awoodda Runic (Janaayo 12 illaa 7 Maarso).
Mawduuca Kooxda Riyada (Febraayo 9 ilaa Maarso 7).
Bandhig Bacriminta (Janaayo 13 illaa Janaayo 27)
Isqorista Prime (ama Prime Plus) iyo RP Prime (ama RP Prime Plus) isla waqtigaas si aad uga hesho qiimo dhimis khaas ah dukaanka BP Shop iyo RP Redemption Store, hadiyadaha login ee maalinlaha ah, waxyaabaha gaarka u ah BP ee furashada iyo faa'iidooyinka kale ee waaweyn.
Waxaad si qoto dheer ugu eegi kartaa faahfaahinta cusboonaysiintaan cusub isku xirkaan
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Dhamaan waxa cusub ee ku jira cusbooneysiinta moobiilka PUBG 1.2 - qoraallada balastarka oo faahfaahsan
Motorola One 5G Ace, mobilada cusub ayaa horey loogu sii daayay Snapdragon 750G iyo 5000 mAh baytari